အခြား - power disco light bluetooth speaker Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အခြား classified: အသစ် Power Disco light bluetooth speaker
ရောင်းအားကောင်းတဲ့ ion တံဆိပ် Party Power Disco light bluetooth speaker ထပ်ရောက်တယ်နော်😍အသံထွက်အားကလဲရှယ်မိုက်😉ပေးရတဲ့စျေးနဲ့အရမ်းတန်😘 ဈေးနှုန်း - 23000 ks အိမ်မှာနေရင်း sound quality ကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းနားထောင်နိုင်သလို အပြင်ကိုလည်းအလွယ်တကူယူသွားလို့ရတယ်။ 😎 ဘော်ဘော်တို့နဲ့အတူ လူစုံတုန်း သီချင်းတွေ ဖွင့်ပြီး ဒွန့်မလား....? Party ပွဲတွေ နွှဲမလား....? ခရီးထွက်တဲ့အခါ ယူသွားမလား...? အရမ်းမိုက်တဲ့ အမိုက်စား Bluetooth Speaker လေးပါနော်။ Speaker တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပဲ multi-lights function ပါဝင်လို့ အရောင်မျိုးစုံကို tap/touch system နဲ့ပြောင်းနိုင်ပြီး disco light mode လည်းပါလို့ အမြင်အာရုံကိုပါ လန်းစေမှာပါနော်😉 ကဲ...အိမ်ပြင်လဲမထွက်ရဘူးဆိုတော့အိမ်ထဲမှာပဲမိသားစုပျော်ပျော်ပါးပါးသီချင်းဆိုကြတာပေါ့နော်။😉😍